Startup95 – Page 8 – Bringing Myanmar's Startups to The World
Tech in Asia က တရုပ်ပြည်အင်တာနက်ပေါ်ကတစ်မိနစ်တာ နာမည်နဲ့ တရုပ်ပြည်ရှိအင်တာနက်ပေါ်မှာတစ်မိနစ်အတွင်းဖြစ်သွာတာလေးတွေကိုစုပြီး စီစဉ်တင်ဆက်သွာပါတယ်။
Startup95 အဖွဲ့သားတွေကလည်း အားကြမခံ နေ့မအားညမနား မြန်မာ့အင်တာနက်ပေါ်ကတစ်မိနစ်တာ အစီအစဉ်ကို အောက်ပါအတိုင်းမြန်မာနည်းမြန်မာဟန်နဲ့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ့အင်တာနက်ပေါ်ကတစ်မိနစ်တာ — စီစဉ်တင်ဆက်သူ Startup95 အဖွဲ့
UMG Group: one of the biggest distributors of heavy equipment in Myanmar has launchedasuite of initiatives dubbed UMG Idealab. On 4th of February 2017 at their launch party they brought attention to3things about Idealab: their nurturing program, an idea competition, and their most recent startup success: Beexpress.
Yangon’s Chief Minister U Phyo Min Thein Giving an Opening Speech at UMG Idealab Launch
“Our goal is to create 1,000 startups in next 15 years. Doing so we look to support 1,000–3,000 new founders, who in return will employ 50,000 people. Frankly speaking by doing this we look to createapositive effect for about 5,000,000 citizens of Myanmar by then.” announced Mr Kiwi Aliwarga. Read More »
Tech in Asia က တရုပျပွညျအငျတာနကျပျေါကတဈမိနဈတာ နာမညျနဲ့ တရုပျပွညျရှိအငျတာနကျပျေါမှာတဈမိနဈအတှငျးဖွဈသှာတာလေးတှကေိုစုပွီး စီစဉျတငျဆကျသှာပါတယျ။
Startup95 အဖှဲ့သားတှကေလညျး အားကွမခံ နမေ့အားညမနား မွနျမာ့အငျတာနကျပျေါကတဈမိနဈတာ အစီအစဉျကို အောကျပါအတိုငျးမွနျမာနညျးမွနျမာဟနျနဲ့တငျဆကျလိုကျပါတယျ။
မွနျမာ့အငျတာနကျပျေါကတဈမိနဈတာ — စီစဉျတငျဆကျသူ Startup95 အဖှဲ့